Ngexesha lakho mbambi-dliwano-ndlebe ziza bathethile ixesha kwi inkampani yakho, kuya i-impression ukuba ukhe ubene a mnandi guy kwaye umdla! Baninzi abantu bamele scared ekufeni ukuze kuxoxwe unye kunye engaziwayo, yi-uloyiko umngxuma omnyama ngomhla fateful mzuzu. Wethu omkhulu ububele, sino ezilungiselelwe le incinci isikhokelo ukunceda uyazi. Ukongeza, ukwazi ukuthetha malunga nge kubekho inkqubela ngu crucial kodwa hayi kwanele: sino igqityiwe inqaku nge Phambi sihamba okungaphaya, ukumbule ukuba kumele kuphetshwe e zonke iindleko ukuqhuba incoko ifomu i-interrogation. Kubalulekile impazamo kakhulu ngokufanayo njengoko baqonde abaninzi kuthi. Kukho nezinye iindlela ukukhokela iincoko yi-ecela imibuzo kwaye uyakwazi zama Ezi izihloko lwengxoxo ingaba kakhulu elula, njengoko sisebenzisa ngoko ke accustomed ukuba uthetha malunga oko yithi rhoqo. Ukuba oku ukusebenza nabo xa ufuna kubuyela kwi vacation, umntu omnye meets yi-ithuba okanye abahlobo Siyazi ukuba uyakwazi kakuhle kakhulu sebenzisa olu uhlobo izihloko incoko ngexesha intlanganiso yokuqala.
Nangona kunjalo, zikhathalele na ukufumana stuck kwezi subjects kwithuba elide kakhulu, umzekelo, ingaba sekhe zahlangana a kubekho inkqubela abo sele ufuna ukuhamba? Kuba indima yam, akukho Nkqu ukuba yena ayizange bafumene ithuba utyelele isihloko, focus, necessarily, njengoko ixesha elide njengoko uyazi njani ukuba kuxoxwe ngayo kunye uqukuqelo. Akukho mfuneko uluhlu onke amazwe ukuba ngamnye kufuneka travelled ukufumana enye ngokufanayo. Kufuneka kule meko ezininzi trouble ukusa phambili, stuck kwi kakhulu factual, akukho utshintsho lwendawo ngokwenqanawaname yenziwe. I-imbono, xa ngaba kuthetha ukuba yena journeys, ukwenza kwakhe banyukele emotions kwaye ngempumelelo uyakwazi hook kwi kuyo: Opt kuba khetho wesicwangciso uhambo kunye. Buza kuye, umzekelo, nokuba ngaba kungenxa backpack okanye luxury hotel Ukuba babeya ikhethe a uhambo kwi-Peru okanye ngeveki getaway kwi-Emaldives. I-unye apha ingaba ukufumana subjects othe yenzala ngokufanayo ukuze ukuya kwincoko apho u-interlocutors bazive ethambileyo. Njengoko Dale Carnegie l wenze kakuhle kakhulu wachaza wakhe best-uthengisa incwadi»njani ukwenza abahlobo», ibe appreciated ngabanye, kufuneka ukwazi ukuthetha kubo malunga benza ntoni na kakhulu, oko kukuthi ukuba kwabo, Xa yakho interlocutor sele athethe ixesha kwi inkampani yakho, iya kuba impression ukuba ukhe ubene a mnandi guy kwaye umdla! Ukwazi oku, nazi ezimbalwa iincam, koko ke, umntu e wawuphungula kwi inkampani yakho, kuba incoko ukuba yena likes: Xa ufuna ngaphaya koko, intsholongwane wenze isigqibo kumnika ilizwi, uza sibakhuthaza ukuba athethe, kwaye lento ngokukhululekileyo ntoni yena ufuna. Kule intlonipho, vula-ophele ngowama-imibuzo, oko kukuthi, abo musa ukuphendula nge -«ewe»okanye»hayi»(ivaliwe imibuzo), kukho isixhobo ozifunayo. Kwi-umahluko ukuba ezivaliweyo imibuzo, apho kubalulekile ukuba ngubani steer i incoko ukuba ingaba oluchanekileyo iimpendulo imibuzo usebenzisa ecela, ufuna apha kuye shiya indawo free ngoko ke ukuba unfolds, ukuze ukwazi amadonga betha phantsi emva xa ufuna. Mbuzo ngokuthi umzekelo ngomhla wakhe ezinzulu kwaye imisebenzi ukuze ube carries ngexesha lakhe free ixesha, okanye isihloko ukuba uphelelwe anomdla ukuba fumana kuyo (uhlobo umculo yena listens, wakhe isebe lemicimbi yenkcubeko nemidlalo, ngubani yena ingaba kwi umhla imvula) Ngeli lokwaluka ye-incoko, uyavuma ukuba consciously hayi ukuba bathethe kakhulu kakhulu ukuvumela ngayo ulindele umsebenzi wendalo ukuba uzibonakalise ngaphandle isinyanzelo. Ukuze ube glplanet incoko, bakhetha kuqhubeka elinye icala, bouncing ngomhla wakhe iimpendulo kunokuba constantly ukutshintsha phantsi. Kuba oku lumka xa uthetha nge-practicing esebenzayo emamele. Ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, oku asiyo ixesha shiya ngayo a monologue ngaphandle end xa ufuna ukuphumla okanye njengoko kufuneka oglegenericname Ngelixa yena ke uthetha, ufuna ukufunda izinto ezininzi kuyo, ukuba factual (ngubani yena likes ukwenza), bakhe indlela ukucinga (opinions) okanye yayo ukuziphatha (njani kubalulekile isitsho-t-xa isihloko yena ngu passionate malunga). Emamele lento, ezinye izinto ziya nceda kwenu, umdla, ucela ngaphandle ukuthandabuza ngamanye amaxesha awuyi kuba enye imbono, okanye n khange na indlela bakwenzayo. Kule meko: Kwakhona a isifundo wafunda Dale Carnegie, ukuba ufuna ukuba abe appreciated lomnye, hayi argue hayi inika ingxelo imbono eyahlukileyo ukusuka abakhe. Unoxanduva kwi-isigaba apho ufuna ukujonga ukwakha kokuthenjwa eshiya thetha, yena sele akukho umnqweno ukuxoxa i-imbono eyahlukileyo ukusuka abakhe. Ngokungathi andinanto into kunzima ukusebenza ngokupheleleyo ubuxoki factum into, ngaphandle kokuba ukuba ucela ukuba iziqinisekiso impendulo yakho, ingaba niya kuyigcina echanekileyo! Yethu yendalo tendency yenza kuthi ukwenza opposite kwaye ufuna educate abanye bethu ulwazi. Ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, thina ayinakuze ukufikelela iinjongo zethu kwi-questioning uluvo lwethu interlocutor.
Oku akuthethi kuba ngaphaya
Kwi ephikisana, xa ebe listened ukuba ixesha elide, uninzi girls uya yazi kwaye ndiya jonga ukuba ufuna ukwazi lowo ufaka. Kubalulekile ke ixesha kumnika wanting ukwazi ngakumbi, Musa get kum ezingachanekanga, le asiyiyo ngenxa kubekho inkqubela kubuyela kuwe umbuzo, emva kokuba ulwenzile listened kuba imizuzu elishumi, ukuba yena ufuna ukwazi yonke inkcukacha ubomi bakho. Ukuba kwi-impendulo yakho, awunokwazi gcina zabo ingqalelo ngokukhawuleza, unengxaki enkulu ithuba yokulahla kuyo. Ngoko ke kufuneka omfutshane impendulo kwaye landmark ukuba eyona imibuzo yena unako buza. Umbuzo»yintoni Ufuna ukwenza njengoko umsebenzi,»ukuba usebenzisa i-engineer technician e a umzi-mveliso mechanical amaqela ukuba, phakathi kwezinye izinto, sells ukuba Airbus, khetha impendulo»ndenze airplanes»ende, ngakumbi iinkcukacha kwaye lonto yenza ngaphantsi masango. Kuba ke ka-elifutshane anecdotes kwaye stories glplanet ukuba mamela ke ukuba yena ayikwazi babambisa a glimpse ka-uhlobo lomntu ukuba uphelelwe. Kuba umbuzo malunga yakho ezolonwabo umzekelo, kuxoxwe imveliso ukuba awenzanga kutshanje kunye nabahlobo kwaye ibali ukuba ufuna bafika ngaloo mini, njengoko ukuba kwakukho uthetha ukuba a girlfriend ixesha elide umhla. Nokuba yakho passion, ungakwazi ukwenza oko umdla emehlweni abanye abantu. I-trick ngu ukwazi thetha Funda ukuthetha malunga ngokwakho, oko kukuthi, ngaphezu kwazo zonke, funda ukuya kuxelela ngokwakho yayo salient amava, ukwenza kwabo exciting. Phambi kokuya ngakumbi, sibe propose ukuqwalasela ezininzi imizekelo ngempumelelo interactions ukuze bafunde okulungileyo ukuba illustrated. A classic mpazamo ezininzi abantu ukuba ufuna zoba kukufutshane yi-ekudalweni intuthuzelo. Ndiyithetha yi-intuthuzelo, uya kulindeleke ukuba le ntombi yena ithetha malunga yakhe ubomi ngelixa yena ingaba wena uyayazi phantse hayi. Ngenxa yoku, bonke subjects ingaba kakhulu personal, yamiselwa njengenxalenye incoko, ndiya kuba ukuphepha ekuqalekeni ndibano, umzekelo, buza kuye malunga yakhe ubudlelwane kunye nosapho lwakhe, apho yena sele lixoxiwe kunye abahlobo bakhe, ngubani na yena waya kubona. Iya kuba yithi rhoqo waqwalasela njengoko i-intrusion wakhe private ubomi ukuba awazi ngokwaneleyo Oku kunzima umbuzo kuba uya zixhomekeke heavily kwi-umlingane wakho ngokunjalo ngendlela apho ufaka idibene. Kwimeko intlanganiso i-intanethi, mna idla bakhetha kuhlangana umntu phambi sihamba kakhulu ukuza kuthi ga ngoku kwi-intuthuzelo eselunxwemeni. Eneneni, girls jikelele kuba abaninzi nabo kwaye akunyanzelekanga ukuba ufuna umngcipheko yokulahla ngenxa nokungabikho inzala. Xa intlanganiso kwenzelwa, izinto zinako ke ezahluka-hlukileyo.
Kwimeko i-umntu ntlanganiso, unako hamba ngokukhawuleza
Kuba kangangoko, musa ukuthetha lwakhe kwimizuzu ukuba balandele yakho kwintlanganiso, njengoko abaninzi abantu uza kusilela phezu a isihloko se incoko kakhulu personal kuba kukufutshane ukuba kubekho inkqubela, akahlawuli ukugcina ethile umgama, ulinde ukwazi oko ngcono. ukuba ufuna nceda a kubekho inkqubela, uthethe kuye malunga into fun! kufuneka ahlangane a kubekho inkqubela yi-ithuba kwi-street, e-iqela okanye kwi dating site, into yokuqala ukwenza ukuba ngempumelelo okokuba a glplanet ixesha kunye, kuba oko ukwenza uxolelwaniso a ezilungileyo ixesha, kwaye unoxanduva icingela ukuba kubekho inkqubela ufuna nje kuhlangatyezwana nazo zenza passionate malunga ne-nkqubo: uya kwazi ukuba azibandakanye kwi kubalulekile iingxoxo kunye nawo, ukuba ngaba uyakuthanda oku uhlobo ngxoxo. Kuba konke oko, njengoko wachaza lokuqala inxalenye»yintoni ukuthetha malunga nge kubekho inkqubela», ekuqaleni i-ndibano, kufuneka kumele kuphetshwe expressing yakho njl kwaye argue ngohlobo ephikisana opinions yakho interlocutor Hayi kakhulu kakhulu zingqinelana loluphi uhlobo exchange yokugqibela kwaye hayi noko, ezi izihloko ukuthutha kuyanqaphazekaarely emotions.
Kule intlonipho, awufuni ukuba abe umntu othe wenza yakhe ezibuhlungu, upset ngenxa yokuba yena associates, kolawulo lwabo ulawulo ngokwasemthethweni, oku yeemvakalelo zakho imeko yakho ebusweni. Oku caricature ka-umahluko phakathi indoda ingqondo kwaye ibhinqa ingqondo, icacisa kakuhle kakhulu zethu injongo: thina, madoda, kanjalo kulinywa, esinenkathalo, comment njengoko sisebenzisa, sonke kuba yenzala kwi-ngesondo, kude ekubeni negligible. Kwaye akukho zeentloni kule! Kuba konke oko, siya kufuneka kuqala nangona lumkela ukuba phantse bonke abantu bamele ngokunjalo. Ngoko ke, khumbula ukuba abafazi awunayo efanayo ngokwesini njengokuba nathi. Ukwazi oku, ufuna ukuqonda ukuba kutheni le topic ayisayi kuba eyona ndlela ingcono kwi-kwangoko stages a incoko? Ukuza kuthi ga ngoku zininzi kakhulu abantu besenza. Ekwenzeni njalo, kuqala, wena ufuna comment hayi uninzi guys. Ke remix in a ngokwesiqu, uninzi ixesha, alifumanisanga broached nomcimbi kunye kakuhle. Uvumelekile ukuba, ke ngoko, hayi amanqaku ngokwenza njalo
← Kwi-intanethi girls
Chatroulette France Free Jikelele Webcam Incoko Isifrentshi Ividiyo Dating Girls Chatroulette Incoko →